ပြိုင်ပွဲ Archives - BuzzFeed Myanmar
လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ပွဲနဲ့ အာရှအားကစားပွဲတော်ဝင်ပြိုင်မယ့်မြန်မာအသင်းမှာ အောင်သူ ပါဝင်လာမည်
ဖီဖာအသိအမှတ်ပြု ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပေမယ့်လည်း POLICE TERO အသင်းကစေလွှတ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့် သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပမယ့် လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ အာရှအားကစားပွဲတော်ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၂၃ အသင်းမှာ အဓိက တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ ပါဝင်လာမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဥိးကိုကိုသန်းက ပြောပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်းအား ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မည့်သူ ထွက်ပေါ်လာပြီ
One Championship မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ထိုးသတ်မယ့်သူ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ချာ ပြိုင်ပွဲ တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေးLike နဲ့ Share လုပ်ပြီး ချီးမြှောက်ကြရအောင်။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့Math Kangaroo 2018 ပြိုင်ပွဲကြီး၏ဆုရရှိသူများ စာရင်းထွက်ပါပြီ။ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ သတင်းလေးတစ်ခုပြောပါမယ်။
အင်စတာဂရမ် မှာ ချစ်သူကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ၀ိုင်းလေး
အဆိုတော်ဝိုင်းလေးဟာ အိမ်မက်ဆုံရာ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှ စတင်ကာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သူမဟာ Miss World Myanmar 2014 မှာ အလှမယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ပြိုင်ပွဲမှာ သူမဟာ အလှမယ်သရဖူ ဆောင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူမကို ချစ်ခင်သူတွေ ပိုပိုပြီး များပြားလာခဲ့ပါတယ်။
လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ အတွက် ဘယ်အသင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်ထားလဲ?
မိမိထက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဖိတ်ကြားထားပြီး မလာဖြစ်ပါက ပိုမို မြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၂၃ အသင်းအတွက် ပွဲကြို ပြင်ဆင်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် ကျင်းပမယ့် လေးနိုင်ငံ ဖိတ်ခေါ် ဖလားပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Voice Myanmar နည်းပြ တွေ ဘာကြောင့်အဝတ်အစားမလဲတာလဲ..?
ဒီမေးခွန်းက The Voice Myanmar အစီအစဉ်ကို အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၉ နာရီဆိုရင် MRTV-4 က ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ The Voice Myanmar ကို ပြည်တွင်းကရော ပြည်ပမှာပါ ကြည့်ရှုအားပေးသူတွေ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ် တိုးလို့လာနေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မန်ယူကို အနိုင်မယူဖူးတဲ့ အသင်း (၁၁)သင်း
QPR အသင်းကိုတော့ မန်ယူပရိသတ်တော်တော်များများ မေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မန်ယူအသင်းကို ၂ ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်ထားပြီးမှ ချေပဂိုးတွေနဲ့အတူ နောက်ကျ ဦးဆောင်ဂိုး ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်းဟာ မန်ယူအသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖူးမယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ရပ်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။
သင်မသိသေးတဲ့ ရွှေမှုံရတီ ရဲ့အကြောင်းတွေ
သူမက အလှကြိုက်တာ မေမေ့ကြောင့်ပါတဲ့။ မူလတန်းအရွယ်အထိ ညဘက်အိပ်ရင်တောင် သနပ်ခါးလိမ်း၊ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုး၊ ဆံပင် ကို သေသေချာချာဖြီးပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ သာသာလေးအိပ်တတ်တယ်။မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိ ညကအိပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ အရမ်းဝါသနာပါခဲ့တယ်။ အလှ လည်း ကြိုက်တ ယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်း ဝါသနာပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ သူမကိုအားလုံးက အနုပညာအလုပ် လုပ်စေချင်ကြတယ်။